Tsy namaly ny fanasan'ny filoha Ravalomanana Ny Ben'ny tanÃ na Andry Rajoelina?
2008-10-30 @ 21:26 in Politika
Raha ny fiheverako manokana dia tokony ho hita amin'ny gazety rahampitso (zoma) fa hanome "fanampiana" manokana amin'ny alalan'ny Fonds Local de developpement ny Kaominina an-tanandehibe 45 eto Madagasikara ny filoha Ravalomanana manomboka ny Janoary 2009 ho avy izao. Entina hanatsarana ny tanàna moa no anton'izany.
Tsy dia idirako lalina moa ny amin'iny fa ny nanaitra ahy tamin'ity toe-javatra ity dia ny tsy nahitana ny Ben'ny tanànan'Antananarivo tamin'ity fivoriana manokana ity. Ny televiziona viva mihitsy anefa no narahiko tamin'io fotoana io ka tsy maintsy mampiseho ny salovantavan'ny tompony izy raha nanatrika tao io lehilahy io (lehilahy io satria efa mitantana an'Antananarivo fa tsy boay kely aza fady indrindra). Ny sary dia manambara zavatra bebe kokoa noho ny fitantarana na dia avy amin'ny mpanao gazety mahay indrindra aza.
Eo ary no mampanontany tena. Ny avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika mihitsy ve no tsy nanasa ny Ben'ny tanànan'Antananarivo sa ny fiadidiana ny tanàna no nanadino nampitondra ny taratasy fanasana ho an'ny Ben'ny tanànan'Antananarivo sa ny tao amin'ny fiadidiana ny Renivohitra no mihevitra fa tsy ilaina loatra ny nanatrika io fotoana fanararaotra io? Moa tsy ny fotoana tahaka ireny indrindra ve no tena anehoana ny fahavononana hiasa sa efa nanava-tena sahady Atoa Andry Rajoelina fa tsy hahazo anjara amin'io vola ikarakarana ny tanàna io velively? Tsy maintsy misy ny diso eto na ny iray amin'ny andaniny sy ny ankilany na ny roa tonta mihitsy?
Tsy sahy nanoratra ity velively aho raha fantatro fa tsy mbola tonga eto an-tanindrazana ny Ben'ny tanànan'Antananarivo. Hitako tamin'ny tvplus anefa ny fahatongavany halina. Sa mbola reraka ny lehilahy taorian'izay dia lavalava izay. Tsy sasatry ny manontany aho satria toa mifandimby ny tsy vonona hiara-hiasa amin-kitsim-po na ny avy amin'ny fitondrana foibe na ny avy amin'ny fiadidiana ny tanànan'Antananarivo renivohitra. Tsy hisy velively anefa ny fandrosoana raha samy mihatsaravelatsihy tahaka izao ny roa tonta.
Sa misy vondron'olona te-hanala baraka an'Antananarivo eto amin'ny fihaonana antampony hatrehina amin'ny taona ho avy iny sy ny manaraka? Raha efa fantatra fa tia ny politika madio ivelany araka ny filazan'ny Jeneraly Ramakavelo azy ny mpitondra ankehitriny, moa tsy eo indrindra ve no anararaotana hahazoana vola betsaka ikarakarana ny tanàna noho ny tamin'ny fanomanana ny lalaon'ny Nosy tamin'ny herintaona (2007) aza? Asa aloha fa dia nanolo-kevitra ihany aho na dia tsy nifidy azy aza noho ny fitiavako an'Antananarivo. Fa ilay fitiavana tokoa mampirediredy an!
Tsenan'Asabotsy Antsirabe: Hiodina ho aiza indray io $2 000 000 vao azo io?
2008-10-30 @ 08:19 in Toekarena
Dia variana tokoa aho amin'ny fahaizan'ny olona mitady vola. Misy ny tena henjana araka ny filaza. Efa lany tanteraka ny vola nanamboarana ny tsenan'Asabotsy io araka ny fahalalako azy na tsy nomena intsony noho ny fitantanana tsy mazava loatra. Dia tavela teo ny fanamboarana ny tsena ary efa nieritreritra aho fa tsy ho vita intsony izy io na dia ao anatin'ny 20 taona ho avy aza. Tsy nisy na dia iray aza ny fitaovana hanamboatra ny tsena. Kanjo ankehitriny dia re fa nahazo famatsiambola $2 000 000 indray ny fanamboarana ny tsenan'Asabotsy. Ary heverina fa ho vita amin'ny marsa 2009 amin'izay ny tsena.
Ny faniriana moa tsy hisy intsony ny simenitra sy vy ary vato may ka tsy nahavitana intsony ny tsena teo aloha. Fa mbola tsy azoko hatramin'izao ny nahatonga ireo zavatra ireo ho may tao amin'ny fitehirizan'entan'ny Kaominina Antsirabe renivohitra nefa moa TIM no mpitantana koa zanak'i dada izany tsy miahiahy loatra ny hahazo olana ry zareo fa raha misy izany metyholasa any andafy tahaka ilay mpitantana tany Mahajanga ihany koa. Fa dia tena rediredy koa anie ny ahy izany fa ny hamisaisana ny ratsy hiavian'ny soa e!
Dia mba hahazo toerana amin'izay ny mpivarotra fa mijaly loatra.
Aiza ary izao tanÃ na izao?
2008-10-28 @ 20:22 in Andavanandro
Mety ho misy ireo tsy miraharaha ny hahazo izany kaominina mendrika ifaninanana izany. Misy kosa anefa ireo kaominina ambanivohitra no tena mandray izany hanaovana ezaka manokana. Tsy dia lavitra loatra ny renivohitra ity tanàna asehoko anareo ity, nefa tsy ao anatin'ny Kaominina Antananarivo renivohitra velively. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia niova endrika tanteraka ny endriky ny tsena sy ny fiantsonan'ny fiara amin'ity toerana ity.
Toerana fandehanako ihany, tsy tsaroako intsony ny endriny teo aloha fa mahafinaritra kosa ny mahita azy amin'izao fotoana izao. Mbola hita miharihary ireo fiara fitaterana maro manavaka ny maha-ambanivohitra ny toerana nefa lasa ny saiko manao hoe: Sao dia izy no tena mandroso ho amin'ny tanàna maoderina?
Endrey ireto tambanivohitra mipetrapetraka sy mialoka eo ambanin'ilay fialofana tsy misy dokambarotra na orinasa na iza na iza zary manimba ny endriky ny tanàna izay indraindray. Vao namaky boky iray izay aho ka tao no nahitako fa amin'ny tena hevitry ny voambolana jentilisa (raha heverina amin'ny teny hebreo angaha no tiany lazaina) dia hoe tambanivohitra. Dia soratako eto ihany aloha ho fitadidiako.
Fa ny tena tsikaritro ry zareo dia ireo andri-jiro mitovitovy karazana tamin'ireo teny amin'ny ranon'Anosy tsy hita nanjavonana ireny a! Teny Analakely koa tanatin'ny zaridaina manoloana ny arcades fipetrapetrahan'ny olona moa nisy karazany tena nahafinaritra mihitsy tamin'ny fiadidiana ny tanàna teo aloha fa efa ny fototra sisa niangana manamarika hoe hay moa nisy karazan-javatra tahaka izao koa teo Analakely teo.
Fa miresaka Analakely ihany dia manararaotra kely. Tena tsara endrika aoka izany ireo fefy fanitso ambony karazana entina mamefy ny zaridainan'ny Lapan'ny tanàna vaovao ireo an! tsy maintsy soloina ihany ireo fefy teo aloha indrindra ireo eo anoloana ireo fa efa simba sy manaratsy endrika ny tanàna loatra ny fefy teo aloha. Ny zavatra tsara tokoa aloha tsy maintsy miainga amin'ny fonony tena tsara sy maha-te-hijery e! Ho tsara fanomboka ity raharaha ity.
Ny soritra manambara fa marary i Jacques Sylla
2008-10-23 @ 00:45 in Politika
Efa nisy ihany ny fotoana namoahan'ny fampahalalam-baovao iray fa narary ny filohan'ny antenimierampirenena ankehitriny Jacques Sylla ka voatery nitsabo tena tany ivelany. Andro iray na roa taorian'ny filazana anefa dia nambaran'ny haino aman-jery hafa fa nandray masoivoho roa ny tenany toy ny ilazana amin'ny besinimaro fa tsy marina ilay filazana an-gazety. "Toy ny ilazana" fotsiny izany fa tsy nisy fanambarana nataony tamin'ny mpanao gazety tsy akory mandiso ny vaovao niely teo aloha.
Izay nahita ny fandraisam-bahiny roa nataony dia nanontany tena ihany hoe tsy marary ve izany izy? Efa nananontanona ihany anefa ny fanokafana ny taom-piasan'ny solombavam-bahoaka izay entiny amin'izao fotoana izao. Tranga roa avy hatrany no tao an-tsaina raha vao nahita izay fivoaran-draharaha izay. Ny voalohany dia tena narary tokoa izy fa miezaka ny manafina, satria toa mora ny hanalana ny olona amin'ny toerany raha vao hita ny fahalemeny. Mbola tarazo amin'ny mpitondra ankehitriny manko ny manafina ny aretiny amin'ny vahoaka, indrindra fa manoloana ireto mpanohitra mitady izay fomba rehetra hamelezana anao na dia amin'ny zavatra tsy misy dikany ireto aza. Faharoa, te-hisongadina kely izy na manana zavatra tian-kambara (na amidy raha toa ka artista izy) dia mody atao ny filazana fa marary izy na nisy zavatra toy izao na izatsy nahazo azy. Sarotra ihany anefa ny ilazana fa te-hanao ity tranga faharoa ity izy na dia eo aza ny fanambarany ny karazam-pahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka izay tsy misy azo lavina nataony tamin'ny fotoam-panokafana teo.
Tonga tokoa ary ny fotoam-panokafana. Dia nitatitra ny nolazainy ny haino aman-jery nihazakazaka tany amin'ny filazana ny zavatra nolazainy. Dia variana tany avokoa ny mpamaky sy ny mpijery ary ny mpihaino fa mety ho vitsy ny olona nahatsikaritra ny fomba nampitan'ny filohan'ny Antenimierampirenena ny resaka. Ny kabary nataony tamin'ny radiom-pirenena ihany, eny tompoko mihaino dia mihaino ary mpanaraka ny vaovao atoandron'ny Radio Madagasikara aho, no nahafahana nahatsikaritra fa farim-peo dia farim-peo ny lehilahy ary toy ireny tsy hahatafavoaka feo ireny aza fa manery tena tsotra izao hamita ny kabariny araka izay tratra. Tena niova ny feony, tsy azo nafenina io indrindra fa mpiteny sy mahay mandaha-teny izy ka mahatadidy tsara ny feony taloha aho. Asa ianareo raha mahatadidy fa nisy ny filazana tany alohaloha tany ny tsy amoahana ny teniny mihitsy amin'ny haino aman-jerim-panjakana. Nahagaga anefa tamin'ity indray mitoraka ity fa nivoaka ny kabarim-panokafana nataony. Ny aiza no tena tian-kavoitra? ny filazana ny fahasahiranam-bahoaka sa ilay feony farina nilaza ny fahasahiranany niteny?
Marihina moa fa zanaky ny Minisitry ny raharaham-bahiny tamin'ny andron'i dadabe Tsiranana Atoa Albert Sylla ny lehilahy, efa nandray ny fitantanana izany minisitera izany ihany koa izy (nanaha-dray?) tamin'ny fotoana nitondran'Atoa Zafy Albert ary efa praiminisitra nandritra ny vanim-potoana voalohany nitondran'ny filoha Ravalomanana mitondra ankehitriny. Misy hosinganina ihany koa ny tranga nahazoany ny toerana mahafilohan'ny Antenimierampirenena azy amin'izao fotoana izao. Io manko no toerana azo lazaina ho tsy tinendrin'ny Filoha ankehitriny na baiko avy aminy fa tolona manokana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny haino aman-jery indrindra fa ny karajia tamin'ny fotoan'androny. Niverimberina matetika manko fa noho ny efa maha-protestanta (refôrme) ny filoha sy ny praiminisitra dia tsara raha mba katolika kosa no filohan'ny antenimierampirenena. Terin'izay fandresen-dahatra izay, araka ny fijeriko azy ny mpitondra mpanatanteraka, no nahatonga azy nanaiky tsy fidiny hamela io ho azy. Sandan'izay moa, dia nofandrihana sy nandrasana kendry tohina ny fandaharana karajia tsy hanasongadina olona tsy avy amin'ny sitrapon'ny mpitondra mahefa intsony.
Efa nosiahan'ny Malagasy ihany koa ny La Marseillaise
2008-10-19 @ 18:06 in Spaoro
Nanana ny akony nahatonga ny filoha Frantsay handray fanapahan-kevitra hanajanona avy hatrany ny lalao ny fisiahana ny La Marseillaise hiram-pirenena Frantsay mandritra ny lalao iraisam-pirenena iray ilalaovan'ny ekipam-pirenena Frantsay amin'izay mifanandrina aminy (any amin'ny taniny).Izany dia tohin'ilay toe-javatra nitranga tao amin'ny Stade de France nihaonan'ny ekipam-pirenena Frantsay tamin'ny ekipam-pirenena Toniziana izay nozanahin'ny Frantsay taloha tamin'ny talata 14 oktobra 2008 lasa teo.
Ny tena tsy levon'ny vavonin'ny Filoha Frantsay sy ireo antoko lehibe UMP sy PS tamin'ity fisiahana ny hiram-pirenena Frantsay ity manko dia ny karazana famadihana ataon'olona mizaka ny zom-pirenena Frantsay ihany. Miharihary eo imason'ny rehetra manko fa ireo mpijery Arabo nanatrika ity lalao ity dia mizaka ny zom-pirenena Frantsay ny ankamaroany. Tena manafintohina tokoa raha ianao izay nitady ny zom-pirenena Frantsay ka nahazo izany no misiaka ny hiram-pirenena Frantsay mandritra ny fihaonana ara-panatanjahan-tena iray. Eritrereto anie ka ny Tanindrazanay Malala no anaovan'ny Malagasy toetra toy izany e!
Ny teto Madagasikara moa dia tsy nahita ity lalao ity, sy ny Champion's league ihany koa, satria toa misy tsy fifankahazoana lalina eo amin'ny CFI sy ny TVM, na eo amin'ny mpitondra Frantsay sy ny mpitondra Malagasy ihany koa saingy tsy mivandravandra loatra izany; fa na izany aza dia tonga taty ny akony noho ny vaovaon'ny TF1 alefan'ny televiziona sasantsasany eto an-toerana. Raikitra ihany koa ny adi-hevitra eo amin'ny mpinamana na mpihavana ny amin'ny mahamety na tsia ny fihetsika nataon'ny Arabo nisiaka ny hiram-pirenena Frantsay ity. Eken'ny rehetra manko fa mafana ra ny Arabo. Etsy andanin'izany, raha misy ekipa Malagasy tonga any amin'ireny tany vaventy ireny dia hotohanan'ny Malagasy monina any ireny, eny fa na dia mizaka ny zom-pirenen'io firenena io aza izy. Hafa manko ny akaikin'ny fony raha mbola teto Madagasikara ihany koa no nahalehibe azy. Hafa mihitsy indray ny sain'ny ankizy raha tsy mba nohalehibiazina teto Madagasikara izy. Fa eo amin'ilay fisiahana ny hiram-pirenena mihitsy no mampisara-kevitra ny maro.
Fa olona efa retirety kosa no nilaza, izaho tsinona tsy nahita, fa efa nosiahan'ny Malagasy ihany koa ny Hiram-pirenena Frantsay raha sambany mba nisy ekipa avy any Lafrantsa mihitsy fa tsy avy ao La Réunion nandingana ny kianjan'ny Mahamasina tamin'ny taona 80 tany ho any. Mbola nisy tavela izany ny fankahalana Frantsay nandritra io fotoana io na dia efa tanaty fahasahiranana aza ny Malagasy. Vao nanomboka hoy izy ny La Marseillaise dia nisy olona maromaro nisiotsioka ilay hiram-pirenena. Nifampijerijery, hoy izy, ireo niaina tsara izany Fanjanahantany izany. Voakapokapoka karavasy sy mety higadra mihitsy izay mbola tratra mihetsiketsika mandritra ny La Marseillaise, na izay lehilahy tsy manala satroka ihany koa. Tsy azo natao ny miresaka fa manaja tsara ilay hira ihany no zava-dehibe. Ankehitriny (tamin'io fotoana io) dia toa tsapa tokoa fa tsy voafehin'ny Frantsay hay ny Malagasy ka azo natao na dia ny nanompa ny hiram-pireneny La Marseillaise aza.
Fandalovana ihany anefa ilay vanim-potoana satria nandritra ny Lalaon'ny Frankôfônia notontosaina teto Madagasikara ka nanao ny famaranana tamin'ny basket ny Frantsay sy ny Senegaly dia naka Frantsay avokoa ny 98%n'ny mpijery Malagasy. Tsotra ny antony, Ny senegaly manko no nandresy ny Malagasy tany amin'ny dingana talohaloha tany. Izaho kosa no tao anatin'ilay 2% nanohana ny Senegaly satria fiaraha-mientana Tatsimo sy Afrikana ary samy nozanahin'ny Frantsay no tao an-dohako. Izaho izany ilay nihoraka mafy rehefa nandrombaka ny amboara ny Senegaly fa toy ny nivoaham-paty kosa ny ankamaroan'ny Malagasy. Na ireo namako niara-nijery ny lalao tamiko aza lasa nisy niavona tamiko rehefa nody, nefa aho amin'io mbola nanadrohadro ihany.
Ny tena nahavariana ahy dia ny tamin'ny lalaon'ny nosy notanterahina tamin'ny herintaona teo (Aogositra 2007). Tena tsy menatra ny manohana La Reunion mihitsy ireo vehivavy Malagasy manambady Frantsay na dia Malagasy izao aza no ifanandrinany. Tena babon'ny Frantsay tokoa, hoy aho, ny fo amam-panahiny ka tsy nanafina mihitsy ny fankamamiany Frantsay ry zareo. Dia hoy aho namarana hoe, tena hafa mihitsy ny Malagasy mizaka zom-pirenena Frantsay raha ny tahaka azy ireo. Miala tsiny aminareo vehivavy manambady vazaha aloha fa tsikaritra sy nivandravandra mihitsy io tamin'ny lalaon'ny Nosy ranomasim-be Indiana farany teo, ka tsy vitsy ny bandy no letra sy nanompa azy ireny mihitsy aza saingy safidy io ka tsy ifanerena no tena marina.
Ny e-bit 12 tsy hitan'ny besinimaro
2008-10-18 @ 22:38 in Andavanandro
Malaza ihany ny e-bit amin'izao fotoana izao. Eo manko no ifaninanan'ny mpanome tolotra ny hiaka farany amin'ny sehatra misy azy tsirairay avy. Efa andro natokana ho an'ny besinimaro moa ny faran'ny herinandro ka ny fitaovana isankarazany no arantiranty mba hamidy. Ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina moa no anatontosana ity hetsika ity.
Ny zoma teo kosa ny ahy no tantaraiko. Zoma, fotoana natokana hitsidihan'ny mpianatra madinika sy lehibe ity hetsika ity. Mazava loatra fa ny hijerijery no tena ataon'ny mpianatra fa tsy ny hividy loatra. Mety hifanindran-dalana amin'izany ny tsy iraharahian'ny mpivarotra ireto mpitsidika ireto. Tsy misy vola miditra loatra manko no dikan'izany. Ireo nandray anjara tamin'ny Barcamp teto Antananarivo tamin'ny 4 oktobra 2008 lasa teo kosa dia nomena toerana malalaka tany amin'ny efitra kelikely kokoa fanaovana fanazarantena an-trano io atsinanan'ny Lapaben'ny Kolontsaina io. Io andro zoma io ihany manko andro nandraisan'ny "Quartier Libre" (ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny Barcamp teto Antananarivo) anjara tamin'ity hetsika ity. Hampiseho sy hanazava ary hanorotoro fa tsy hivarotra tahaka ny hafa rehetra sy zatra ny hetsika toa tsy misaraka amin'ny varotra.
Indreo ary ny tanora erotrerony maro avy amin'ny foko-madagascar (foko blog club) avy any amin'ny faritany, avy eto an-toerana ary avy any ampita no maro an'isa sy miavaka indrindra indrindra noho ny tee-shirt fotsy misy ny famantarana ary nomena ny andraikiny tsirairay avy tamin'ity hetsika ity. Toy ny olona tsy mahalala vizana mihitsy i Jogany mivezivezy etsy sy eroa mikaro-bahaolana noho ny toe-javatra tsy ampoizina isan-karazany. Tena deraiko manokana kosa izy tsy nitandro hasasarana sy nividy izay fitaovana rehetra mety ilaina eo noho eo hampahafatarana araka izay azo atao ny hetsika "Quartier libre" (foko, telomiova, c3lf, amul, Madagascar au temps TIC,...) izay sady tsy nampahafantarina ampahibemaso loatra no toa natao an-takonana tsy fantatry ny atsy amin'ny efitra lehibe akory ny fisiany, enga anie mba ho diso tanteraka ny hevitro eto.
Raha efa niomanana ny hanaovana videoprojecteur ho an'ny Quartier libre dia tsy nisy tampoka ny fanamafisam-peo itenenana. Raha tonga ary ny andiany voalohany tamin'ny mpianatra dia tsemboky ny niteny mafy avokoa ireo tokony ho mpanentana nefa toa tsy ren'ny ankizy loatra izany. Ny tena fotsiny no tsemboka, soa aloha fa voavaha ihany ny tamin'iny avy eo. Manaraka izany dia mifanila aminay moa ny Minisiteran'ny inona angaha (fahasalamana sa mponina sa fampianarana fa resaka ady amin'ny SIDA aloha no fototra). Nisy lahatsary fohy naseho ary dia nanontany ny mpianatra avy teo. Noho ny dokambarotra niseho tetsy sy teroa ary dia zavatra hafa ihany no voatazon'ny sain'ny ankizy. iray aloha mampiasà kapaoty (fimailo io). Toa nisy fanontaniana nipoitra tampoka nomena ny ankizy ary hoe fa firy taona dia efa mahazo manao firaisambatana. Nisy ny namaly hoe 16 taona, nanontaniana izay mitovy hevitra tamin'ilay namaly fa be no nanangatanana. Oay lehiretsy! nihomehy fotsiny ny olondehibe. Efa nilaza ny ao an-tsainy aloha ny ankizy e! dia hitanareo ny nosaininy tany anatiny tany!
Henoko tsara io satria gaga aho tamin'ny fanakanana ireo ankizy tsy hiampita tety amin'ny Quartier libre raha toa tsy nahaliana azy ny resaka. Tsy maintsy mihaino ny resaka fanasana tanana (andron'ny fanasana tanana amin'ny savony tokoa moa? atidoha hatramin'ny farany aloha ny mpianatra vao mahazo miala teo. Hitako tsy tratran'ny minisitera mihitsy ny tanjona satria tsy tafajanona ela teo intsony ny ankizy manaraka ary nony farany aza tamin'iny maraina iny dia nihanjahanja nampalahelo teo ny habaka lehibe nisy azy. Rehefa nandalo hitafa amin'ny mpanao gazety vetivety ny sekretera jeneraly no niangaviana izahay tsy hampiasa fanamafisam-peo aloha fa tsy mampihena ny fifantohan'izy ireo. Izahay anefa tsy nitabataba ahoana akory saingy nahatsiaro ho difotra ihany koa noho ny fanontanian'ny ankizy isankarazany sy ny fahamaroan'izy ireo.
Resaka fanentanana sy fanazavana izany ny tao amin'ny lapakely atsinanana fa tsy misy zavatra amidy. Mba hiavahanay tamin'ny besinimaro sy hanatonan'ny olona anay hiresahany aminay dia naka teeshirt foko ihany koa izahay (nanaronako ny teeshirt telomiova nanaovako) hanaovana hitovin'ny akanjon'ny mpanentana sy ny mpikatroka rehetra. Nisaotra hatrany an'i Jogany tsy sarotiny. Tsy maintsy noheverina manokana ny nametrahana afisy teo ambaravarana hamantaran'ny ivelany fa misy zavatra mety hahaliana azy ireo ihany koa tamin'ity e-bit ity fa tsy voatery ho CITIC nafindra toerana fotsiny ilay hetsika. Isaorana ihany ny mpikarakara nanome fotoana ho anay tamin'io andro io.
Ny maraina moa izahay no teo fa tsy maintsy namonjy ny lahasa andavanandro kosa ny tolakandro. Ny tolakandro indrindra anefa no tena misy ny fanentanana, ny atrikasa (ateliers) mety nahaliana ny besinimaro hiresaka zavabaovao amin'izy ireo. Tsy afaka milaza izay tsy natrehako no sady tsy nahazoako fitateram-baovao momba ny tolakandro aho. Marihina fa efa ady sy tolona (resaka sy fifandraharahana ary fifanazavana), miandry valiny mivory hatramin'ny folo alina ny alarobia, hatramin'ny valo sy sasany alina ny alakamisy vao nahazo io fotoana zoma io ny Quartier libre. Isaorana hatrany ireo rehetra avy amin'ny Quartier libre niady varotra mba hahazoana anjara toerana ho an'ity andro tokana ity.
Nisy zavatra... [fangaron'ny 1991 - 1995]
2008-10-10 @ 11:58 in Kolontsaina
Ity tononkalo nosoratako ity dia fitambarana tononkalo
Nosoratana tanelanelan'ny taona 1991 sy 1995
izany hoe tamin'ny taona 1995 no nanambarana azy ho toy ny iray.
Marihiko hatrany fa tia nanoratra tononkalo aho aloha
vao nivadika ho amin'ny lahatsoratra malalaka ahafantaranareo ahy.
Mazotoa mamaky amin'izao andro zoma mahalasalasa ambiroa matetika izao.
Ny fanombohana dia efa notsikerain'ny tenako sahady taty aoriana
Efa voasoratra anefa ilay izy: ny fahazazana tsinona sehatra hafa sy tontolo hafa
Nisy zavatra nanala tamiko
ka nidirako fiainana vaovao
Nisy zavatra nanaitra ahy
hampifaly ny foko
raha toy ny nanjoko aho tao ho ao
ka nampanadino ny kitra tanatiko tao
Nisy zavatra nanasoa ahy
ka nizorako mangina
Izay miditra mankao
teo anivon'ny laka
ka tsy hihambakavaka
na iza hisompatra na iza hikaka
Eny, nisy zavatra namonjy ahy
Raha saiky voaronjin'
sy ny sotasotan'
izao tontolo izao aho
Saingy nisy zavatra nanampoka ahy
ny andry natsatoka
nefa io no nenti-nijoro tsy hataho-draorao
Nisy zavatra nampitombina ahy
ary raha irery
tsy mitsahatra ny manjombona
marina moa raha maha-te-hijery!
Fa nisy zavatra nandrisika ahy
sy mbola misisika
fa sendra raho-mitatao
Nisy zavatra nandavo ahy
ho be taraina
ny nantenaina no nanjavona tsotra izao
Nisy zavatra tsy nampihetsika ahy
Ilay sambo nentiko
voateny ho azy ny tafita vao rendrika
Nisy zavatra nampatory ahy
tao anaty sorisory
izay rehetra nomanina
tsy nisy vanona
satria tsy tao ny solika nanodina milina
Nisy zavatra nandrotika ahy
ny fiainako zary mahatofoka
Nisy zavatra nampimalo ahy
ny eritreritra ao anaty
fa izaho irery no mijaly toy izao
Nisy zavatra nampiala nenina ahy
amin'ny Ray Tsitoha
ary hiankohoka eo anatrehany tokoa
Nisy zavatra nampiarina ahy
izay namihina ahy teo
tsy nahavitana na inona na inona
Nisy zavatra nanala ahy
fa nampihiratra ny masom-panahiko hatrizao
Nisy zavatra nampitony ahy
tsy hitomany intsony;
Nisy zavatra nitaiza ahy
tsy hitako hoe aiza
ny taraina nihorona tao amin'ny miafina.
Nisy zavatra nampanetry tena ahy
fa nampitombo fahendrena
izany no fandresena
lehibe noho ny fahitana volamena
Nisy zavatra nanova toetra ahy
tsy ho mora letra
ny halako avy
no nataony ho zakako sy ho namako.
Nisy zavatra naniraka ahy
hampahery ny vizaka
sy ny voahitsaka
hanadinoany ny zava-nampangitakitaka
Nisy zavatra nandranitra ahy
ny mitory hatrany ny fanjakan'ny lanitra
Barcamp Antananarivo 2008 Madagascar araka ny sisa tadidiko
2008-10-08 @ 06:00 in Ankapobeny
Tsy hohadinoina velively tsy akory ity vanim-potoana iray nandalo teto Antananarivo tamin'ny Asabotsy 4 oktobra 2008 ity. Sambany rahateo ka mety ho be ny ny tsy mahalala izay tena nitranga nandritra ny tontolo andro. Tsy nandray naoty na tamin'ny penina sy ny taratasy aho na tamin'ny findain-tsolosaina nefa hosoratako aloha ny fandehan'ny raharaha tao araka ny tadidiko.
Voalohany, miainga amin'ny zavatra somary mahatsikaiky ihany aho. Fantatro tsara fa ho maromaro ihany ny hitondra solosaina finday. Mazava loatra fa tsy entina miharihary iny fa entina anaty kitapo kosa. Izao anefa, na dia mihamora aza ny vidin'izy io noho ny fidinan'ny sandan'ny vola dôlara dia tsy mbola nividy aho no sady mety mbola tsy mahatakatra ihany koa. Ahoana ary ny nataoko. Nitondra kitapo ihany aho, fa boky lehibe misy izay nosoratako nandritra ny taona 2006 sy 2007 no nataoko tao. Mitovitovy habe nefa mety hitovy lanja amin'ny findan-tsolosaina io boky io ka nihomehy anaty ihany aho nitondra ilay izy. Sahala amin'ny nde mba hoe manko.
Ny nanokatra ny raharaha moa dia i Diana Chamia, tovovavy mpianatra mpanao gazety avy any Mahajangà any. Tiany ny manampy ny mpiara-belona aminy ka izay no nahatonga azy nanao izay hanampiana ny renin'i Kamba (Kamba izay misy toy ny trafo ao amin'ny handriny) tamin'ny alalan'ny bolongany aloha, hitan'ny Malagasy mpiara-belona manerantany iny ka nampihetsika ny fanampiana io zaza io sy ny reniny. Fikambanana maro no nihetsika fa ny fantatro aloha eto amin'ny serasera dia ny Namana serasera (na ampielezana na eto an-toerana) sy ny foko-madagascar. Fantampantatra ihany fa mbola misy ny hetsika hafa saingy misy moa no tsy dia loatra ny itantarana azy nefa dia isaorana mandrakariva ny karazan'olona tahaka ireny manampy ny mpiara-belona aminy sy manaporofo fa mahay mifanampy ihany koa ny samy Malagasy.
Nifandimby amin'izay ny mpampiasa ny software na mpandrindra ny momba ny rindrakajy (araka ny infogasynet sy i Mahefa) na ny rindrambaiko araka an'i Di... (Henry Rahaingoson). Ny tena tafalentika ao an-dohako aloha dia ny hoe hafa ny rindrambaiko na rindrankajy malalaka sy maimaipoana sy ny rindrankajy na rindrambaiko malalaka fotsiny (logiciel libre et gratuit sy ny logiciel libre fotsiny). Ny faharoa dia mety hoe amidy aminao ny entana ary omena anaoihany koa ny lakileny hifehezanao azy manontolo. Tsy lazaina moa amin'izany ny rindrambaiko na rindrankajy manatompo. Mihaino tsara fotsiny aho fa mety ho azoko ihany ny momba azy rehefa tena liana aho. Nifandimby niresaka teo ny avy amin'ny C3lf Fianarantsoa sy ny amul ary ny eboons. Mety hozokoa ihany manko izay nambara fa tsy ahiko kosa ny mampita azy rehefa tsy nisy ny fitaovana manokana ho amin'izany.
Ny tena tadidiko teto dia ny resaka nataon'i Haja Ramboasalama filohan'ny Amul araka ny reko momba ny IXP. Tsotra ny fanazavany azy: raha misy olona roa samy eto Madagasikara mampiasa FAI (Fournisseur d'Acces l'Internet na mpanome tolotra ifaneraserana) samihafa dia izao no zavamisy: Mampiasa FAI iray i Koto hampita hafatra amin'i Soa mampiasa FAI hafa kosa. Mankaiza ny lalan'iny hafatra iny? Miainga eto Madagasikara ilay hafatra dia mankany amin'ilay FAI ampiasain'Ikoto dia lasa any Alemaina mandalo any Etazonia vao miverina eto Madagasikara mankao amin'ny FAI misy an'i Soa vao tonga any amin'i SOa. Izany hoe lasa lavitra ny lalana, elaela kokoa vao tonga ny hafatra sady lafolafo kokoa ny saran'izay. Tsy mahagaga raha sady vitsy mpampiasa aty Afrika no aty Afrika ihany koa no lafo indrindra ny saran'io serasera io. Arakaraky ny habetsaky ny mpampiasa rahateo izany. Tranga faharoa, Misy vitsivitsy maromaro ny FAI mifanaraka mba ho kely kokoa ny fandaniam-pifaneraserana. Misy hatrany anefa ny FAI tsy miditra anaty fifanarahana, mbola hisy ny olana rehefa tsy ny FAI no mifanaraka.
Inona ny vahaolana natolotra? io IXP io izay manana anarana hafa maromaro ihany koa saingy noadinoiko tanteraka. Eo amin'ny Besinimaro dia karazana foibe iray mitovy asa amin'ny Switch (internet) goavana dia goavana io IXP io ka izay te-hanamora ny fifandraisana rehetra dia mifandrohy aminy avokoa. Inona ny tombotsoa azo avy amin'ny fampiasana ny IXP? Tsy voatery mankany Alemaina, Frantsa, Etazonia ny lalankafatra vao hiverina eto Madagasikara indray fa eto Madagasikara ihany ny fivezivezeny. Faharoa, raha sanatria misy manapoaka na mikatso tanteraka ny zanabolana (mety mitranga izany ary azo heverina mihitsy ny hisiany) dia mbola afa-miasa ihany ny aterineto eto Madagasikara fa tsy hiaramaty amin'ny an'izao tontolo izao. Mbola afaka hiasa avokoa ny banky ny sy karatra solombola rehetra hifandraharahana ary ny orinasambarotra mampiasa serasera rehetra. Fanirian'ny mpanolotra mba tsy ho tratra aoriana tahaka ilay hazondamosin-tserasera (backbone) nandalo tao atsimon'i Faradofay folo taona lasa izay ny fieritreretana ity IXP izay tokony ho tombotsoa lehibe ho an'ny Malagasy manontolo io.
Nanaraka indray i Pierre Maury niresaka momba ny boky avoakany amin'ny alalan'ny aterineto, ka ireo boky efa tsy ananan'ny taranaky ny mpanoratra zo intsony, talohan'ny fitopolo taona lasa izay (1938) no avoakany. Mazava loatra fa noho ny tsy-fifehazany ny teny malagasy dia izay boky amin'ny teny frantsay ihany no avoakany ao amin'ny bolongany sy ny vohikalany. Asa, anjaran'ny hafa indray izany ny miresaka momba ny boky nivoaka tamin'ny teny malagasy. Mazava loatra fa mba tsy handikana ny lalàna dia izay efa lasa fananambahoaka ihany no azo avoaka, izany hoe izay rehetra talohan'ny fanjanahantany sy izany nandritra ny fanjanahantany hatramin'ny taona 1937.
Niditra indray i Avylavitra efa nahiako tsy hoavy, soa fa tonga na dia fantatra aza ny fahasahiranany, niresaka momba ny fahalalaham-pitenenana sy fahalalana mamoaka vaovao eto Madagasikara. Nolazainy fa miditra ho elanelam-panahy izy, tsy mpanohitra bontolo ary tsy mpanohana be fahatany. Resaka politika izany lazainy izany! Eto moa dia efa taratra sahady fa mifankahita tsara amin'izay ny mpampiasa ity kajimirindra ity nefa samihafa ny tontolo iainany sy ny fampiasany ny solosaina. Samy miezaka mahazo ny ataon'ny ankilany ny andaniny avy. Asehon'ny mpamaham-bolongana fa haingana kokoa ny famoaham-baovao avy amin'ny olotsotra mampita vaovao noho ny an'ny gazety izay mbola miandry fankatoavana avy amin'ny tonian'ny fanoratana. Ny mpamaham-bolongana kosa dia araka ny sitrapony ihany na hamoaka ny vaovao izy na tsia. Ny ahy moa tsy hitako loatra izay lazaina. Nilaza ny fivoriana vao natrehiny tany Brussels notohan'ny Rising Voices kosa i Pati (et toi).
Nilaza izay tokony atao raha tiana ho hita amin'ny aterineto kosa i Ariel ary nolazainy fa ny soratra na fihetsiketsehana iray dia telo volana mialoha ny fotoana no tsara anoratana azy mba ho hita tsara izy amin'ny andro ilàna azy.
Ny zavatra iray mila avoitra ihany koa dia ny ezaka manokana ataon'i Mahefa hametrahana tsikelikely ny fanitsiana ny teny malagasy izay mitady fanampiana amin'ny namana rehetra mahafehy ny teny malagasy sy ny rindrankajy na rindrambaiko hiara-manatontosa io tetikasa fampiroboroboana ny teny malagasy io. Asa izy raha afaka manome fanazavana bebe kokoa satria tsy tokony hiasa irery amin'io tetikasany io ary ho hitako ihany koa ny hanampiana azy. Izay sy izay aloha ny tena tadidiko, misy dia misy ny tsy voalazako toy ny an'i Herizo sy Tosoa saingy rehefa tsy voafehiko ny resaka aleo mangina.
Haveriko ve? [haisoratra]
2008-10-07 @ 10:15 in Kolontsaina
Ny endri-baliakan'ny androko omaly
Nokitihin'ny tsiky nampihetsika fo
Hotodihina indray ve ny fahazazana
Dia ny fiainana goanan'ny tsy fahalalàna?
Ny haitraitra madinika niravahakohatrany
nikarohana retsika tsy fantatra loatra
ka iniana amin'izao... odian-tsy tsaroana
ny fo tsy afa-tsaona tamin'izany fotoana?
Ny fientanetanana toa rano mandroatra
hihetsika nefa toa tsy zatra ady
be fikirizana fa tsy afa-nanoatra
sehatry ny tolona tsy omby tratra?
Ny manampi-tsofina amin'ny eso sy latsa
hanandratana ny afon'ny fanantenana
ka miandry ilay minitra ivadihan'ny rasa
mba hanatanterahana izay nokinasa?
Ny vetso mangina nameno ny loha
nanosika ny saina hiriorio any hoany
mikaroka hevitra tsy hampikoa
ny androany no ita fa rahampitso mitohy?
jentilisa - 1995 -
Ny mpanao gazety malagasy sy ny mpampihorohoro
2008-10-06 @ 06:04 in Politika
Ny mpanao gazety malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy no nahatsiaro ho voatsindrona tamin'ny tenin'ny praiminisitra niantsoana azy ireo haingana tao anatin'ny fotoana fohy ka nandrenesana ny hoe ao anatin'ny fampihorohoroana eo anatrehan'ny praiminisitra ny fampielezana vaovao tsy marina (na "mampihorohoro") ataon'ny mpanao gazety. Fampihorohoroana ny fanakatsakanana tsy hanatanterahan'ny governemanta ny fandaharan'asany na ny fanatontosana ny MAP. Hafa avy hatrany moa ny handraisan'ny mpampita vaovao ny resaka ary dia hiditra nanatsipalotra azy aho na dia efa fantatro fa nampihena ny mpamaky ahy aza ny fidirako resaka politika izay mampisara-kevitra, nefa tsy Maharesaka ny Maharesaka raha tsy miresaka azy aloha.
Ny tao an'eritreritra dia hoe mitady hanapa-kevitra samirery ny fitondrana fa tsy mba mihevitra ny hiara-midinika amin'ny vondron'olona mety ho voantohintohina ny tombotsoany na ny fiainany. Nefa ny mpanara-baovao dia tokony tsy hody fanina mihitsy tamin'ny vaovao navoakan'ny "La gazette de la Grande île" momba ilay hoe Alemana novonoina tao amin'ny fari-dranomasin'i Nosy Be miaraka amin'ny sary ahitana ny loha tapaka sy natao teo anelanelan'ny tongotr'ilay olona ny lohany teo amin'ny takila voalohany indrindra (tena natao haharikoriko mihitsy matoa naovaka pejy voalohany ny sary). Nalahelo moa ny masoivoho Alemana tamin'io sary io satria voalohany, tamin'ny taona 2005 io toe-javatra io no nitranga. Faharoa, ny filazana ofisialy no nanambarana fa namono tena io lehilahy. Fahatelo, misy andiana mpandraharaha indridra mitsidika ny Nosy tamin'ny fotoana namoahana ny vaovao. Midika izany fa nokendrena hampihemotra ireo mpandraharaha ireo tsy hampiasa vola eto Madagasikara ny vaovao. Io toe-javatra io no nanafintohina ny praiministra araka ny fijeriko azy ka nahatonga ny teniny fa tafiditra ao anatin'ny "fampihorohoroana" ny famoahana ny vaovao manakatsakana ny asan'ny goverinemanta. Misokatra indray ary ny adihevitra e!